पति बाहिर भएको बेला गर्भ वती भएकी श्रीमतीले दिइन् दु नियाँ च कित हुने यस्तो जवाफ « गोर्खाली खबर डटकम
पति बाहिर भएको बेला गर्भ वती भएकी श्रीमतीले दिइन् दु नियाँ च कित हुने यस्तो जवाफ
२०७७ असोज १३ गते मङ्गलवार प्रकाशित
काठमाडौं । विश्वमा हरेक दिन नयाँ र अनौठा घटनाहरु भइरहेका हुन्छन् । अहिले बाहिर आएको समाचार भारत बिहार राज्यको हो । जगदीशपुर पुलिस क्षेत्र यहाँ छ । यहाँ एक महिला गर्भवती हुने बित्तिकै बबाल भएको छ । महिलाको नन्द यस सम्बन्धमा डीआईजी पुगेकी थिईन् । अब तपाई सोच्दै हुनुहुन्छ, के भयो ?
वास्तवमा, गर्भवती महिलाको पाँच वर्ष पहिले विवाह भएको थियो । ऊसँग डेढ वर्षकी छोरी पनि छ । तब सम्म सबै कुरा ठीक थियो । महिलाको नन्दका अनुसार उनकी भाउजु तीन महिनादेखि गर्भवती भइन् ।
जबकि उनको दाई लामो समय देखि सँगै छैन । दाई सात महिना देखि कोलकातामा छन् । सात महिना देखि भेटघाट नभएपछि भाउजुको पेटमा बच्चा कसरी आयो भन्दै प्रहरीमा उनले खबर गरिन् ।
दैनिक भास्करका अनुसार नन्द यस बारे आक्रोशित थिइन् । उनी डिआइजी विकास विभवसम्म पुगिन् । उनले डिएनए परीक्षणको माग गर्न थालिन् । जब डाक्टरहरूले अनुसन्धान गरे, तब यो पत्ता लाग्यो कि बच्चा तीन महिनामा १२ दिनको भएको रहेछ ।
नन्द रिसाएको मात्र थिइनन्, महिलाका पतिले पनि यो को हो भनेर प्रश्न गर्न थाले ? अब ती आइमाईले दिएको जवाफ सबैभन्दा रोचक छ । उनले गाउँ पञ्चायत बसेका बेला आफुसँग राती सपनामा आएर पतिले यौ’न स’म्बन्ध राखेको अनी बच्चा पनि उनैको भएको दावा गरिन् ।
कुरा यहीं समाप्त भएन । परिवारका सदस्यले महिलालाई साथमा राख्न अस्वीकार गरेपछि पञ्चायत बसे । त्यहाँकी महिलाले भनिन् कि बच्चा उसको पतिको हो । उनका पति सपनाहरुमा आउँथे। र यही कारणले गर्दा उनी गर्भवती भइन् ।
पञ्चायतको समयमा महिलाको फोन पनि जाँचिएको थियो । उनको फोनमा केटाको नम्बर फेला पर्यो । त्यसपछि पोल खोलियो कि यो बच्चा त्यो केटोको हो, र यी महिला उसँग सम्बन्धमा छन् ।
टु,क्रा–टु,क्रा पारी सिमेन्टले प्लास्टर गरिएकाे सुजिताको श’व शौचालयको ट्याङ्की भित्र भेटियो